Tenga tadalafil poda yakawandisa (171596-29-5) Vagadziri & Fekitori
Cialis (Tadalafil) poda (171596-29-5)
Tadalafil powder, inotengeswa pasi pezita rinonzi Cialis pakati pevamwe, imishonga inoshandiswa kurapa erectile dysfunction (ED), benign prostatic hyperplasia (BPH), uye pulmonary arterial hypertension. Ihwendefa inotorwa nemuromo. Kutarisa kunowanikwa mukati mehafu yeawa uye nguva yakareba kusvika maawa 36.
References & chigadzirwa mhizha
Cialis (Tadalafil) poda Vhidhiyo
Cialis (Tadalafil) poda tsananguro
1.Chii chinonzi Tadalafil poda?
Tadalafil powder, iyo yakasvibirira tadalafil, inorudzi rwepepuru yakachena, kazhinji yakashandiswa kuita tadalafil mapiritsi. Tadalafil drug, aslo inonzi / Cialis, imwe yekirasi yemishonga inonzi PDE-5 (Phosphodiesterase type 5) inhibitors. Kuita zvepabonde kukurudzira Tadalafil / Cialis inorambidza misungo yemidzi yeropa uye inowedzera kuwedzerwa kweropa kune dzimwe nzvimbo dzomuviri. Tadalafil / Cialis uye imwe PDE-5 inhibitor inogona kubatsira varume vane erectile dysfunction (ED) nekusimudzira mhinduro ye erectile kana murume achiita zvepabonde. Inoshandiswa kurapa erectile kusagadzikana (kusina simba) uye zviratidzo zvebenatal prostatic hypertrophy (yakawedzera prostate). Vanhu kazhinji vanotenga tadalafil powder kubva kuchena kwakakwana tadalafil powder mugovera. Kunze kweTadalafil / Cialis, iyo mimwe mishonga iri mukirasi iyi ndiViagra (Sildenafil) uye Levitra (Vardenafil), naFlibanserin.
2.Nzira yekutora tadalafil poda?
Raw tadalafil powder inonyanya kuuya mumusika mumhando dze tadalafil mapiritsi; capsules, Kana ukasarudza kutora tadalafil, yuou inofanira kuchinja mazamu maererano nezvinodiwa.
Kune vanhu vazhinji, iyo yakakurudzirwa kutanga mazai e tadalafil ndeye 10 mg pazuva, kazhinji inotorwa 30minutes mushure mekuita zvepabonde (tadalafil kuti ishandiswe sezvinodiwa). Zvichienderana nehutano hwemhinduro kana migumisiro, chirwere chinogona kuwedzerwa kusvika ku 20 mg kana kuderera kusvika ku 5 mg pazuva. Izvozvo zvinoshandiswa tadalafil zvinogona kupera kusvika maawa 36. Vanhu vari kutora mishonga inowedzera ropa reatadfilfil haifaniri kudarika chiyero che 10 mg mumaawa e72 (Ona kushamwaridzana kwemishonga). Kamwe chete kushandisa zuva rega rega usingatarisiri kuita zvepabonde chirongwa chekurudzirwa chinonzi 2.5 kusvika 5 mg zuva rega rega. Tadalafil haifaniri kutorwa kanopfuura kamwe chete zuva nezuva.
Nyaya Inokosha: Cialis haifaniri kutorwa ne nitrate nemhaka yekugona kwayo kuderedza ropa. Nitrate haifaniri kutorwa nekuda kwemaawa 48 isati yasvika Cialis kushandiswa nevashandi vakawanda ve nitrate vanoda kuchengeta izvi uye zvose PED5.
3.How kugadzira mvura tadalafil kubva poda?
1) 2 Girazi "Mini-kukura" Doro mabhodhoro (50mL imwe neimwe). Izvi zvinogona kutengwa pabhawa ye chero doro chitoro.
2) 2g (Tadalafil poda) Cialis poda yakasviba poda.
3) "mushonga unodonhedza", ingori pipette / donhwe nemitsetse yakatarwa kuratidza kuti yakakura sei mariri.
4) Girazi diki vial / bhodhoro / mudziyo. Ndakaguma ndoshandisa yekare Solgar ginseng mudziyo. Girazi rakachengetedzeka mune iyi nyaya kana iwe uchida kuchengeta yako Cialis kwenguva yakareba.
1) Raira iyo 2g ye tadalafil raw poda.
2) Tenga mushonga wakachipa mushonga unodonhedza / pipette kubva kune yako munharaunda khemesi ye $ 2- $ 4.
3) Enda kuchitoro chako chechinwiwa uye utenge 2 diki 50mL mabhodhoro edoro.
4) Geza girasi yako vial / mudziyo kana kuti ita nechokwadi kuti haina kuoma.
5) Dururira rimwe bhodhoro rewaini mugirazi.
6) Isa IYO Yese hupfu mugirazi vial. Ungangoda kushandisa mushonga wekunakidzwa asi kana vouti yacho iine muromo wakakwana, unogona kuidurura zvakananga kubva muhomwe.
7) Dururirai rimwe dhodhoro rewaini mugirazi yegorosi.
8) Isa chivharo kumashure girazi uye uvhare zvakasimba.
9) Shingairira nesimba musati matora chiremba.
Uchishandisa iyi nzira uye huwandu (2g yeTadalafil raw poda, 100 mL yehuwandu yedoro doro), 1 mL kuburitsa kwemusanganiswa mutsva yakaenzana ne20mg yeupfu. Iyi ndiyo imwe Cialis dosi. Kuti uve akachengeteka, unogona kutanga nehafu-piritsi. Iyi ingave iri 0.5 mL (hafu ye1 mL) kubva pagirazi vial. Ita shuwa yekuzunungusa pamberi pese piritsi. Kana ichizunguzwa, bhodhoro rinova rakachena semhute.
4.Tadalafil powder Sale
Munharaunda yemunharaunda, kana muchipatara, tinogona kuona zvirialis, iyo tadalafil. Hungu, iyi ndiyo tadalafil powder - chimwe chekushandiswa kunowanzoitwa mushonga wekurapa ED, inowanzo mufananidzo wemapiritsi kana mapiritsi, kunze kweizvi, chaizvoizvo, tadalafil yakashandiswa mune dzimwe nguva, kufanana :
Tadalafil powder nokuda kwekuita zvepabonde
Tadalafil inogona kuwedzerwa pamakwenzi kuitira kuti zvipfeko zvese zviwedzere kuwedzera zvinodiwa zvepabonde zvevarume. Kune mhando dzakawanda zvemasvini epabonde muMalaysia, izvo zvinoshandiswa zvikuru zvinowanzoitwa tadalafil powder, uye sildenafil powder.
Tadalafil powder nokuda kwekasa yebonde
Mumusika, kune mamwe marudzi efivha yepabonde. Zvimwe Zvishandiso zvinowanzo ndezvi: Kokoti Muto, Uchi, Cinnamon, Kocoo, Maca.Kuva kahawa inononoka-rudzi rwekumwa neAztec rinoshandura. Iyo inonaka inenge yakakora, asi inotapira yakakwana yekufambisa kune imwe munhu inotapira. Kofi iyi yepabonde ine zvigadzirwa zvekuvandudza bhaibheri yako. Maca, Cacao, Cinnamon, Honey uye Koconut Muto pamwe chete anobatsira kusimbisa kubudiswa kwehomoni, kunatsiridza hutano hwakanaka, kunonoka kuenda kumwedzi, shuga shoma yeropa, kunatsiridza simba nekuvandudza zvepabonde.
Kwatiri, dzimwe nguva kuitira kuti tive nesimba rakakomba kana risina kusimba mhedzisiro, tinogona kugadzira kofi yekupinda nekuwedzera bonde inowedzera poda tadalafil, zvichienderana nezvinodiwa nemutengi kuti aite akasiyana madhigirii ekofi. Izvi zvinoreva, tadalafil poda inogona kubatsira kugadzirwa mubhofi kofi.
Tadalafil powder nokuda kwewaini yepabonde / kunwa
Aigonawo kuwedzerwa kune utano hwakanaka. Doro pachayo yakawedzera kukanganisa kweropa, zvinonzwisisika kuti tine waini yakawanda inogadziriswa inogona kuwedzera kubuda kweropa kuvakadzi, kuti varume vawedzere muzinga we testosterone muropa, asi zvinoita kuti waini ive munyoro. Uye kuwedzerwa kwehupfu kuupfu kunogona kugadziriswa kune mari inodiwa, uye kunwa kwehutano kunozivikanwa zvikuru nevarume mumusika, zvikurukuru varume vane makore ekumavirira.
5.Where Kutenga Tadalafil Powder?
BUYAAS inonakidzwa nehukama hwerefu nevatengi vedu nekuti tinotarisa pakubata kwevatengi nekupa zvigadzirwa zvikuru. Kana iwe uri kufarira chigadzirwa chedu, isu tinoshanduka pamwe neyakagadziriswa yemirairo kuti ikwane yako chaiyo yekuda uye yedu yekukurumidza kutungamira nguva pamirairo inovimbisa kuti uchave nekuravira kwedu kukuru chigadzirwa pane-nguva. Isu tinotarisawo pamabasa akawedzerwa-kukosha. Isu tinowanikwa yemibvunzo yebasa uye ruzivo rwekutsigira rako bhizinesi.
Isu tiri nyanzvi yeTadalafil poda mutengesi wemakore akati wandei, isu tinopa zvigadzirwa nemakwikwi emutengo, uye chigadzirwa chedu chemhando yepamusoro uye chinoedzwa chakasimba, chakazvimirira bvunzo kuyedza kuti ive yakachengeteka kuti ishandiswe pasi rese.
Cialis (Tadalafil) powder Specifications
Product Name Cialis (Tadalafil)
Kemikari Name (6R,12aR)-6-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-methyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1′,2′:1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
muchiso Name IC351, IC-351, IC 351, Tadalafil, Adcirca, Cialis
Kirasi yeMishonga PDE5 inhibitor
Molecular Wsere 389.411
Monoisotopic Mass 389.1376 g / mol
Kunyorera Point 301-302 ° C
Boiling Point 679.1 ± 55.0 ° C pa 760 mmHg
Biological Half-Life 36 maawa
ruvara White powder
Skukodzera Yakasanganiswa muDMSO, kwete mumvura
Storage Temperature 0 - 4 C kwenguva pfupi (mazuva kusvika mavhiki), kana -20 C kwenguva refu (mwedzi)
APane Tadalafil pasi pezita reCialis inoshandiswa kurapa erectile dysfunction (kushaya simba) uye zviratidzo zve benign prostatic hypertrophy (yakawedzera prostate). Imwe mhando ye tadalafil ndeye Adcirca, iyo inoshandiswa kurapa chirwere chinonzi pulmonary arterial hypertension uye kuvandudza kugona kwemuviri muvarume nevakadzi.
Kukreja, RC, Salloum, FN, Das, A., Koka, S., Ockaili, RA, & Xi, L. (2011). Kukurumidza kushandiswa kutsva kwe phosphodiesterase-5 inhibitors muzvirwere zvemoyo. Kwayedza & Clinical Cardiology, 16(4), e30.
Mostafa, ME, Senbel, AM, & Mostafa, T. (2013). Mhedzisiro ye isingagumi-diki-diki tadalafil pane penile cavernous tishu mune chirwere cheshuga. Urology, 81(6), 1253-1260.
Kaya, B., Çerkez, C., Işılgan, SE, Göktürk, H., Yığman, Z., Serel, S.,… & Ergün, H. (2015). Kuenzanisa kwemhedzisiro ye-systemic sildenafil, tadalafil, uye vardenafil kurapwa pane kupona kweflash ganda mune makonzo. Chinyorwa chekuvhiya kwepurasitiki uye kurapa kwemaoko, 49(6), 358-362.
Porst, H., Roehrborn, CG, Secrest, RJ, Esler, A., & Viktrup, L. (2013). Mhedzisiro ye tadalafil pane yakadzika urini turakiti zviratidzo sekondari kune benign prostatic hyperplasia uye pane erectile dysfunction mune varume vanoita zvepabonde nemamiriro ese ari maviri: Anotarisa data rakapetwa kubva kune ina zvisaririra, placebo ‐ yakadzora tadalafil kliniki zvidzidzo. Magazini yehutano hwepabonde, 10(8), 2044-2052.
Raw 5a-hydroxy Laxogenin powder (56786-63-1)
Pregabalin powder (148553-50-8)
isotretinoin poda (4759-48-2)